Ihe na-echebara echiche banyere SEO - Ọkachamara Semalt
Ka SEO na-aga n'ihu, ndị ahịa na-achọ ịgbanwe usoro ha. Oliver King, ọkachamara ọkachamara na-ekwu na e nwere ụdị nyocha kachasị mma na nke ọma nke na-emepe kwa ụbọchị. Ọ bụ nzaghachi nye mgbanwe ndị dịka ndị Google site na gbanwere ya algọridim iji hụ na ndị mmadụ adịghị aghọgharị ma ọ bụ jiri ha mee ihe. Dika o bu usoro mara mma iji gbochie imeghi ihe n'eziokwu, o putara na ndi oru ahia ga-achogharia echiche SEO
Mweghachi Ego Na-alaghachi
Ijide n'aka na otu onye na-elekwasị anya na isiokwu dị iche iche iji bulie ọkwa bụ ihe dị mma maka azụmahịa. Otú ọ dị, ogo dị elu n'ọchịchọ na-achọpụta apụtaghị na ọ na-eme ka ego nweta ego. Ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma iji ngwá ọrụ ndị dị ka KISSmetrics, ma ọ bụ RJMetrics soro ndị ahịa na ajụjụ ndị a na-ejikarị eme ihe - become a computer expert. Ha na-emecha mee ka ha nweta ego. Ndị mmadụ kwesịrị ịkwụsị iche na mgbasa ozi na-ewu ewu bụ ezigbo ụlọ ọrụ (RO).
Oge gbanwere mgbe ndị mmadụ nwere ike ịnweta ịntanetị site na kọmputa. Site n'ịba ụba nke smartphones, ndị mmadụ na-anọgide na-eji ngwaọrụ mkpanaka arụ ọrụ nke kachasị na-eji eme nnyocha. Google na-agba mbọ iji kwalite ozi a site n'ịhụ na saịtị ndị dị elu na SERP nwere mobile kachasị weebụsaịtị maka ụdị ha. Ebe ndị na-enweghị mmegharị ekwentị nwere ọtụtụ ngwa ngwa nke metụtara SEO n'ozuzu. Mgbe niile jide n'aka na ọ dịghị ihe ọ bụla na - egbochi ọsọ nke ibu ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụrụ na saịtị ahụ kachapụrụ anya.
Gaa na mbara igwe
Ndị na-ere ahịa ejiriwo ogologo okwu ogologo oge na ogologo okwu ha maka SEO ha. Algorithm dị ugbu a bụ nke dị nro ma chọọ ijide n'aka na ọ ga-enwetaghachi nsonaazụ maka ụdị abụọ ahụ Nkọwa okwu dị oke na-enye algorithm ohere iji ghọta ọdịnaya na onodu onye na-achọ, mezie okporo ụzọ na saịtị ahụ.
E gosipụtara Vs. Edeghi
Njikọ ndị e gosipụtara bụ ndị na-ejikọta na saịtị ahụ ozugbo. Ejikọta njikọ na-eme ebe saịtị ọzọ kwuru banyere ọdịnaya na saịtị onye nwe. Ihe ọ bụla a kpọtụrụ aha na saịtị ọzọ na-eme dịka ntuli aka nke obi ike na Google na-emeso nke a dịka ngosipụta nke ewu ewu. Ọ na-atụ aro na saịtị ahụ dị mkpa na ọtụtụ mmadụ na-ekwu maka ya.
Marketing Marketing Ịdị Mma
Enweghị isi ihe ọ bụla ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe bara uru iji kwado ya. Ọ bụrụ na mmadụ enweghị ike ịkọcha ọdịnaya ahụ, mgbe ahụ, SEO abaghị uru. Ọdịnaya nke ọdịnaya a ga-ebu ụzọ buru ibu. Enwere ụzọ abụọ iji nwee ọdịnaya dị mma: iji mkpịsị okwu ọnụ ọgụgụ mee ka ọhụụ dị elu, ozi mgbasa ozi nke ndị ọbịa, inye ndepụta nke Ajụjụ, na ịdekọ ọdịnaya nke ihe onwunwe bara uru na nke a na-ejikarị ejikọta.
Na - eme ihe na - adịghị mma SEO
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume igbochi atụmatụ ọjọọ SEO megide saịtị ahụ. Otú ọ dị, site n'enyemaka nke Ngwaọrụ Google Webmaster, ọ ga-ekwe omume inwe mmebi ahụ. Site na ya, onye nwere ike nyochaa ma soro ndekọ ọnụ ọgụgụ niile iji chọpụta omume mkparị. Onye kachasị anya na-emepụta egwu ndị a, onye nwere ike ịlụ ọgụ n'oge na-adịghị anya. Achọpụtaghị SEO ọjọọ nwere ike ịkpata ahụhụ n'aka Google.
Jide n'aka na ị ga-enwe mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ndị ọzọ guzosiri ike na ụgha nke ọdịiche dị ugbu a. Mmekọrịta dị na oge ụfọdụ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ndị nwere otu ndị na-ege ntị na-achọ ka ha rụọ ọrụ ọnụ.